Shiinaha Mashiinka Cusbooneysiinta Dabaqa SC-004 warshad iyo soosaarayaasha | Jinqiu
go'yaal tayo sare leh, sidaa darteed waxay leedahay awood sare, lumis hoose iyo kuleyl. Qalabka dib-u-habeynta leh ee qorshaysan waxaa laga sameeyaa bir bir ah oo tayo sare leh si loo yareeyo buuqa iyo jaangooyooyinkan helical-ka waxaa laga sameeyaa POM oo leh tayo sare. Daboolka mashiinka iyo mashiinka mashiinka waxaa laga sameeyaa aluminium aluminium ah oo tayo sare leh si loo hubiyo awoodda dhismaha iyo muuqaalka quruxda badan.
Danab / Joogtaynta: 220V-240V / 50Hz
Caday xawaaraha wareega; 154rpm / min
Dhexroor saxanka salka: 17 ”
Dhererka fiilada ugu weyn: 12m
Miisaanka jirka ugu weyn: 34.2kg
Miisaanka guud: 73.66kg
Miisaanka miisaanka birta: 1X14.5kg
Cabbirka xajinta: 375X126X1133mm
Cabirka xirmooyinka jirka ee ugu weyn: 560X450X350mm
Qalabka: Jirka ugu muhiimsan, gacanka, haanta biyaha, suufka sita, burush adag, burush jilicsan, birta culeyska, disk wadista
Hmiyuu shaqeynayaa mashiinka cusbooneysiinta dabaqa?
Gacan qabashadayaashu waxay ku qalabeeysan yihiin aalad isku xidha shaashadda iyo qalab difaac ah oo loo beddelo.
Isku hagaaji xaglaha mashiinka cusbooneysiinta miisaanka markii aan la isticmaalin. Xagasha hagaajinta xagasha waa la kicin karaa, taas oo ku habboon meelaynta iyo keydinta booska. Dhanka kale, ilkaha afaysan ee gogosha qalliinka ayaa la dabcay. Waa la oggol yahay in lagu wareejiyo xakamaynta hawlgalka iyadoo la raacayo kursiga aluminium illaa meel taagan oo dhulka ah. Kadib dabci xagasha hagaajinta xagasha iyo xakamaynta hawlgalka ayaa lagu hagaajin karaa booska taagan. Waqtigan xaadirka ah, aaladda badbaadada ee gacanta ku jirta ayaa si toos ah u dhex gali doonta jeexitaanka badbaadada ee furaha weyn. Xitaa furaha isku dhafan ayaa loo riixay bartamaha; wali ma shidna. Sidaa darteed, waxay ka hortagi kartaa hawl-galnimada waxayna caymis ku heli kartaa nabadgelyada wadaha.
Isticmaalka caadiga ah, xagasha hagaajinta xagasha waa in kor loo qaadaa waana in loo rogaa xagal uu caadeysto hawl wadeenku (ku dhowaad waa 45°xagal leh Dhulka). Kadib dabci xagasha hagaajinta xagasha iyo xagasha qalliinka ayaa go'an.
Markaad bilowdo nadaafadda, mid ka mid ah labada suul ee isku dhafan ee isku dhafan ayaa loo riixayaa bartamaha
isla daqiiqadaas oo biilasha korontada la riixo, markaa mootada ayaa la bilaabay inuu wado
burushka nadiifinta shaqada.
Hore: Mashiinka Cusbooneysiinta BD2AE-Floor
Xiga: SC-1500 Gubi-xawaare sare
60L / 80L Nadiifiyaha Roogga LC-60SC, LC-80SC
Nadiifiyaha rooga ee saddex-mid-ka-DTJ3A / DTJ4A (Qabow ...